दुईतिहाई हल्लाउने एक महिला- SajalSandesh.com – सजल सन्देश
By Sajal sandesh	 On२८ पुष २०७६, सोमबार १३:१२
काठमाडौं- उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले नेकपाको निर्णयलाई चुनौती दिँदै राजीनामा दिन अ स्वीकार गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार पार्टीका दुवै अध्यक्ष, महासचिवसहित नेताहरूकै उपस्थितिमा उनले पार्टी निर्णय नमान्ने चु नौती दिएकी हुन्।
बालुवाटार पुग्नुअघि तुम्बाहाङफे आइतबार बिहानै सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालय पुगेर संसद् बैठक सञ्चालनका लागि गृहकार्य थालेकी थिइन्। १७ पुसदेखि स्थगित संसद् बैठक आइतबारका लागि डाकिएको थियो। आजको अन्नपुर्ण पोष्टले छापेको छ ।
उनलाई पार्टीले पठाएको निर्देशनको पत्र संसद् सचिवालयमा पुगे पनि उनले नखोलेको स्रोतले बतायो। बरु नेताहरूसँग उनले सोधिन्, ‘त्यो पत्रमा के छ र’
तर तुम्बाहाङफे लचक हुने संकेत नदेखेपछि संसद् बैठक एक साता स्थ गित गराउन अध्यक्षद्वयले निर्देशन दिएका थिए। ओली–दाहालको निर्देशनलगत्तै संसद् बैठक तेस्रो पटक सूचना टाँसेर स्थगन गरिएको थियो।
बालुवाटारमा नेकपा नेतासँगको छलफलपछि सिंहदरबार पुगेकी उनले आफूले सभामुख को हो भन्ने प्रश्न राख्दा नेताहरूले जवाफ दिइनसकेको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्। ‘मैले पहिले सभामुख को हो रु सभामुख रिक्त राख्नु हुँदैन भनेर उहाँहरूसँग कुरा गरें। जवाफ आएन। मेरा कारणले सभामुख नेकपाले गुमाउनु हँुदैन भन्नेमा म सचेत छु,’ उनले भनिन्।
जथाभावी बाटो काट्दै हुनुहुन्छ ? सा’वधान ! ट्राफिक सचेतना कक्षा लिनुपर्ला !